Yakachipa Mufudze Screw Extrusion Solid-liquid Separator Dehydrator Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Screw Kubvisa Solid-mvura Separator
Iyo Screw Kubvisa Solid-mvura Separator inoshandiswa zvakanyanya kushambidza mvura kubva mumarara marara, senge mupfudze wemhuka, chikafu chinosara, sludge, biogas masara emvura nezvimwewo huku, mhou, bhiza uye ese marudzi emapurazi ane simba etsvina yemhuka, madhiri, madhiri, starch madhiri, sosi madhiri, kuuraya chirimwa uye imwe yakakwira yevasungwa ye organic sewage kuparadzaniswa.
Muchina uyu haugone chete kugadzirisa matambudziko ayo manyowa anosvibisa nharaunda, asi zvakare anogona kuburitsa yakakwira hupfumi kubatsirwa.
Chii chinonzi Screw Extrusion Solid-liquid Separator?
Iyo Screw Kubvisa Solid-mvura Separator chishandiso chitsva chemuchina chekudzora mvura chakagadzirwa nekureva kune akasiyana epamberi ekudzora midziyo kumba nekune dzimwe nyika uye kusanganisa neyedu R&D uye yekugadzira ruzivo. IyoScrew Kubvisa Solid-mvura Separator inowanzo nyorwa nekudzora kabhodhi, pombi, muviri, skrini, extruding screw, yokuderedza, counterweight, kudzikisa mudziyo uye zvimwe zvikamu, chishandiso ichi chinozivikanwa uye chinoshandiswa zvakanyanya mumusika.
1. Solar mupfudze mushure mekuparadzaniswa unobatsira kutakura uye mutengo wakakwira wekutengesa.
2. Mushure mekuparadzaniswa, mupfudze wakasanganiswa muuswa hwehuswa kuti umutse zvakanaka, unogona kugadzirwa mupfudze fetereza mushure mekugomera.
3. Manyowa akapatsanurwa anokwanisa kushandiswa zvakananga kusimudzira mhando yevhu, uye inogona zvakare kushandiswa kupfuya honye dzevhu, kurima howa nekufudza hove.
4. Mvura yakaparadzaniswa inogona kupinda padziva rebhaogas, iro basa rekugadzira biogas rakakwira, uye iro dziva rebhaogas harizovharwe kuti riwedzere hupenyu hwebasa.
Kushanda musimboti weScrew Extrusion Solid-liquid Separator
1. Chinyorwa chinoputirwa kune main mota nekusa-kuvharidzira slurry pombi
2. Inoendeswa kumberi chikamu chemuchina nekusvina auger
3. Pasi pekupepeta kwebhandi rekumanikidza, mvura inozoburitswa uye kuburitswa kubva pahwindo mesh uye kunze kwepombi yemvura
4. Zvichakadaro, kumberi kumanikidzwa kweager kunoramba kuchiwedzera. Kana yasvika kune imwe kukosha, chiteshi chekuburitsa chinosundirwa kuvhurika kuti ibudise goho.
5. Kuti uwane kukurumidza uye zvemvura zvemukati wekubuda, chishandiso chekutungamira pamberi peinjini huru chinogona kugadziriswa kuti uwane inogutsa uye yakakodzera kuburitsa nyika.
Mafomu & Zvimiro zveScrew Extrusion Solid-liquid Separator
(1) Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa. Inogona kushandiswa kumanyowa ehuku, mupfudze wenguruve, mupfudze wemombe, mupfudze wedhadha, mupfudze wemakwai uye imwe ndove.
(2) Izvo zvinoshandawo kune ese marudzi emhando hombe uye diki mhando dzevarimi kana vanhu vanoita zvipfuwo.
(3) Chikamu chikuru che Screw Kubvisa Solid-mvura Separator muchina wakagadzirwa nesimbi isina chinhu, uchienzaniswa nezvimwe zvinhu, simbi isina tsvina haina nyore kuita ngura, ngura, hupenyu hwehupenyu hwakareba.
Screw Kubvisa Solid-mvura Separator Vhidhiyo Ratidziro
Screw Kubvisa Solid-mvura Separator Model Sarudzo
Dhayamita yefaera mesh
Dhayamita yeiyo inlet yepombi
Liquid zvaikosha chiteshi
Sefa pajira riya
Muchina muviri wakagadzirwa nesimbi yekukanda, Auger shaft uye mashizha akagadzirwa nesimbi isina tsvina 304, firita skrini yakagadzirwa nesimbi isina kukodzera 304.
1.Kudyisa nepombi yezvinhu zvemunyika zvinhu
2.Kudya ne hopper kune yakasimba mamiriro zvinhu
Nguruve mupfudze 10-20ton / h
Yakaoma manyowa yenguruve: 1.5m3/ h
Nguruve mupfudze 20-25m3/ h
Mupfudze wakaoma: 3m3/ h
Pashure: Otomatiki Dynamic Fertilizer Batching Machine
Zvadaro: Vertical Disc Kusanganisa feeder Machine
Nhanganyaya Chii chinonzi Double Hopper Quantitative Packaging Machine? Iyo Double Hopper Quantitative Packaging Machine ndeye otomatiki inorema kurongedza muchina yakakodzera zviyo, bhinzi, fetiraiza, kemikari nemamwe maindasitiri. Semuenzaniso, kurongedza granular fetiraiza, chibage, mupunga, gorosi uye granular mbeu, mishonga, nezvimwe ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Vertical Disc Kusanganisa feeder muchina unoshandiswa? Vertical Disc Kusanganisa feeder Machine inonzi zvakare disc feeder. Iyo yekuyerera chiteshi inogona kudzorwa inochinjika uye iyo yekudonha huwandu inogona kugadziriswa zvinoenderana chaicho kugadzirwa kudiwa. Mune remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara, iyo Vertical Disc Mixin ...
Nhanganyaya Chii chiri Kuisa & Kudya Muchina? Kushandiswa kweKutakura & Kudya Muchina senge mbishi zvinhu yekuchengetera mukuita kwekugadzira manyowa nekugadzirisa. Ichowo rudzi rwekuendesa michina yezvakawanda zvinhu. Ichi chishandiso hachigone chete kuburitsa zvakanaka michina ine chidimbu saizi isingasviki 5mm, asi zvakare hombe zvinhu ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Automatic Dynamic Fertilizer Batching Machine? Otomatiki Dynamic Fertilizer Batching Midziyo inowanzo shandiswa pakuyera chaiko uye dosing ine huwandu hwezvinhu mune inoenderera fotereza yekugadzira mutsara kudzora huwandu hwechikafu uye nekuona iko kurongeka. ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Otomatiki Packaging Machine? Kavha Muchina weFertilizer unoshandiswa kurongedza fetiraiza pellet, yakagadzirirwa kuwanda kurongedza kwezvinhu. Inosanganisira mhando mbiri yebhaketi uye imwechete bhaketi mhando. Muchina une hunhu hwesangano rakamisikidzwa, kuiswa kuri nyore, kuchengetedza zviri nyore, uye zvakanyanya kukwidziridzwa ...